Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Abaphumelele iiMbasa zoKhenketho oluThatha uXanduva lwe-WTM Yaziswa
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iintlanganiso • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
18 imiz efundwayo
Abaphumelele iiMbasa zoKhenketho oluThatha uXanduva lwe-WTM Yaziswa.
Abaphumelele iWTM Responsible Tourism Awards baye babhengezwa, bebhiyozela awona msebenzi ubalaseleyo kwihlabathi liphela.
La mawonga, aphehlelelwa okokuqala ngo-2004, aqaphela kwaye awonge amashishini neendawo ekusingwa kuzo ezinegalelo kushishino lokhenketho oluzinzileyo nolunoxanduva.
Abaphumeleleyo bakhethwa liqela leengcaphephe zeshishini, eliye ladibana kwi-intanethi ukuze livumele ipaneli eyohlukeneyo kumazwe ngamazwe.
Kulo nyaka, i-Indiya igqame kumabhaso avela njengelizwe elikhokelayo kuKhenketho oluneNxaxheba.
Amazwe aseIndiya abone izibonelelo eKerala kwiinzame zeMishini yezoKhenketho eResponsible esebenza ukusukela ngo-2008.
Abaphumelele iMbasa yeHlabathi bachongwe kwawona maBhaso agqwesileyo eIndiya nakwelona Lilonke leHlabathi kunye nabagqwesileyo kwabo sele bengenele i-Afrika kunye neLatin America.
I-Decarbonising Travel & Tourism
Ukutshintsha kwemozulu sikuthi. Yinto ngoku ekufuneka sifunde ukuphila nayo. Ukutshintsha kwemozulu kuya kuba neziphumo ezibi kakhulu kumashishini akwicandelo lethu nakubantu kunye nezilwanyana zasendle kwiimarike kunye neendawo ekusingwa kuzo.
Kufuneka kwakhona sifumane iindlela zokunciphisa ubungakanani bekhabhoni ekhutshwa ngabantu abahamba ngeeholide.
Kufuneka sitshintshe imveliso kunye nokusetyenziswa kokhenketho - ukuhamba, indawo yokuhlala, iindawo ezinomtsalane kunye nemisebenzi zonke kufuneka zithathe amanyathelo ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi ye-greenhouse.
NgeeMbasa singathanda ukubonisa imizekelo yobugcisa, iinkqubo zolawulo kunye neendlela zokutshintsha indlela yokuziphatha yabathengi eziye zanciphisa ukukhutshwa kwegesi yendalo.
Abagwebi bamabhaso ehlabathi bavakalise ukuba kukho intsimi enamandla kakhulu kulo nyaka kwaye bafuna ukugxininisa ukubaluleka kokuveliswa kwamandla ahlambulukileyo kunye nokuba yintoni enokwenziwa, ngokwamkela izisombululo zobugcisa, ukufezekisa ukucuthwa kwangempela kunye nokubaluleka kwezinto ezikhutshwayo.
Ilali yaseGovardhan liziko leehektare ezili-100 lokubuyela umva kunye nomzekelo woluntu lwasefama, ikhampasi ebonisa obunye ubuchwepheshe kwaye ibonelele ngeenkomfa zokuhlala kunye neenkqubo zokufunda, etsala abakhenkethi abangama-50,000 ngonyaka. Iijaji ziye zachukumiseka ngakumbi yinzame esele yenziwe e-Govardhan ukunqanda izinto ezikhutshwayo kwizigaba zokwakha nezokusebenza. Ngokukhutshwa nguziro, i-210kW yeephaneli zelanga zihambisa i-184,800 yeeyunithi zombane ngonyaka.
Umzi-mveliso we-biogas uguqula ubulongwe benkomo kunye nenye inkunkuma emanzi ilingane neeyunithi ezingama-30,660. Umzi-mveliso we-pyrolysis wenza inkunkuma yeplastiki kwiilitha ezingama-18,720 zeoli yedizili ekhanyayo iiyunithi ezingama-52,416 zombane. Ukujongwa kwamandla konga iiyunithi ezingama-35,250.
Izityalo zeSoil Bio-Technology zilungisa ugutyulo kumanzi angwevu asetyenziselwa ukunkcenkceshela, konga iiyunithi ezingama-247,000 ezifunekayo ukumpompa amanzi emlanjeni kwaye ukuvunwa kwamanzi emvula kwanele iinyanga ezingaphaya kwexesha lemvula. Izakhiwo ezikwikhampasi zakhiwe ngeebhloko zomhlaba ezicinezelekileyo ezizinzisiweyo (i-DSEB). Ngoxa udonga oluqhelekileyo lwezitena luthatha i-75 MJ yamandla, udonga lwe-CSEB e-Govardhan luthatha nje i-0.275 MJ; zonke izixhobo zithathwe kwi-100km ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni kwizithuthi.
Ukugcinwa kwabasebenzi kunye noluntu ngobhubhane
Siyaqonda ukuba ubhubhane usekude ukuphela, kwaye njengoko uMbutho wezeMpilo weHlabathi usikhumbuza ngokufanelekileyo, asikhuselekanga de sikhuseleke sonke. Kuyakuthatha iinyanga ezininzi ngaphambi kokuba uhambo kunye nenani leholide libuyele kuyo nayiphi na into "entsha eqhelekileyo" eya kuba yiyo. Siyazi ukuba amashishini amaninzi kunye nemibutho ekwicandelo lezokhenketho kunye nokhenketho basebenze nzima ukugcina abasebenzi babo kunye noluntu abasebenza kulo kunye neempembelelo ezilungileyo kwihlabathi jikelele. Uninzi lwezi nzame zibandakanye abanye kwikhonkco lokubonelela kunye nabathengi.
Singathanda ukuqaphela size sitsalele ingqalelo kwabo baye banceda abanye ngempumelelo, abasebenzi nabamelwane ngokufanayo, ukuba bamelane noqhwithela.
I-V&A Waterfront ibonisa oko kunokufikelelwa lishishini elikhulu lendawo ekusingwa kuyo elizimisele ukusebenza ekusebenziseni isikali salo kunye nokongamela kwabo ukuze kuxhamle abo bangabandakanyiweyo nababekelwe bucala.
I-V&A Waterfront yindawo ekusingwa kuyo ngeendlela ezixubeneyo kwizibuko laseKapa, ​​“iqonga eliququzelelayo kwaye litshatshele ubugcisa noyilo, ukuxhasa ushishino nokuveliswa kwezinto ezintsha, ukukhokela uxanduva lozinzo nokuqhuba inguqu entle kwezentlalo noqoqosho.”
Iqhubekile ikhulisa ingqesho nge-3.7% ngonyaka ngenxa yobhubhane. NgoDisemba ka-2020, njengoko iimeko zazisanda, basungula iMakers Landing, indawo yokutya ebhiyozela iinkcubeko ezahlukeneyo zaseMzantsi Afrika ngokutya.
Kukho ikhitshi le-incubator ekwabelwanayo ngalo, ikhitshi elibonisa ukubala, izikhululo ezisibhozo zemveliso, imarike yokutya enezitendi zentengiso eziguquguqukayo ezimalunga nama-35, iindawo zokutyela ezincinci ezisibhozo kunye neendawo zokutyela ezintlanu ezinobukhulu obahlukeneyo. Kugxilwe koosomashishini abakwinqanaba lakwangoko (abaqalayo, abanqwenelekayo kunye nabasezantsi) abanofikelelo olunyiniweyo kwimithombo yoncedo ekupakishweni kokutya, kwimizi-mveliso yokutya kunye neyokutya. Ukongeza kumashishini ama-ankile ali-17, imisebenzi emitsha engama-84 kunye namashishini amatsha asibhozo adaliwe, ama-70% abantu abantsundu, ama-33% abasetyhini bakhokelayo.
Bazigcinile iinkqubo zoqeqesho kunye noqeqesho, babonelela ngezibonelelo (R591,000) kunye neepasile zokutya i-R1.3m) kwaye baqhubeleka nokuxhasa ngemali iDesika yezoBulungisa kwilokishi yaseNyanga.
Ukuxhasa ukugcinwa kwemisebenzi kwii-SMMEs, baye banyusa imali yokusebenza ukuze baxhase amashishini angama-49, afikelela kwi-R2.52 yezigidi, axhasa imisebenzi esisigxina engama-208 kunye ne-111 yethutyana kwaye abonelele ngofikelelo kuhlalutyo lokuhamba kwemali nenkxaso kunye ne-R20 yezigidi zokunyinyisa irente kubaqeshi babo abangama-270. Ukusuka kwigadi yabo yasezidolophini, babonelele ngeLadies of Love, inkqubo yokutya ephakathi esixekweni ebonelela ngokutya kubantu abahlelelekileyo, ngaphantsi nje kweetoni ezi-6 zemifuno, apho i-130 000 yokutya inikezelwe kumakhitshi ali-12 kwiminyaka emibini. I-V&A Waterfront inokulindeleka ukuba ibe nefuthe elibonakalayo; iya.
Abagwebi bachukumiseke kakhulu yindlela yabo yokuvelisa izinto ezintsha kunye nokuzimisela kwabo ukuqhubeka nokukhulisa amathuba oluntu oluhlelelekileyo nolucinezelekileyo.
Iindawo zokufikela Ukubuyisela Umva ngcono emva kwe-Covid
Kumabhaso kulo nyaka uphelileyo, sabona iindawo ezininzi zokusingwa ebeziqala ukuphinda zicinge ngomthamo wabakhenkethi kunye namacandelo entengiso aza kutsala umdla wasemva kwe-Covid kunye nabanye ababecinga ukudiliza. Ukonyuka okungenakuxelwa kwamanani abatyeleli kuye kwanqunyanyiswa ngubhubhane. Iindawo ezininzi zokusingwa ziye zafumana “umoya”. Isikhumbuzo sokuba yayinjani indawo yabo ngaphambi kokuba isihlwele sifike. Ithuba lokucinga ngokutsha ngokhenketho kwaye mhlawumbi uthathe isigqibo sokusebenzisa ukhenketho kunokuba lusetyenziswe lulo.
Omnye wamabhongo weResponsible Tourism Awards kukukhuthaza amashishini neendawo ekusingwa kuzo ukuba zifunde kwabanye, ziphindaphinde kwaye zandise impumelelo. Iijaji zeeMbasa zeHlabathi bezifuna ukuqaphela kwaye zibhiyozele indlela iMadhya Pradesh ethatha ngayo ukufunda kwabanye, ngakumbi iMishini yezoKhenketho eJonga iResponsible eKerala, ukukhawulezisa nokukhulisa iimpembelelo zayo kuluntu lwasemaphandleni.
Inkqubo yoKhenketho lwaseMaphandleni yeBhodi yoKhenketho yeMadhya Pradesh iphunyezwa kwiilali ezingama-60 kwisigaba sokuqala nama-40 kwisigaba sesibini kwiminyaka emithathu. Le projekthi inika umkhenkethi awona mava okwenene kunye namava aphuhlayo asemaphandleni ngokwenza imisebenzi emininzi yasemaphandleni efana nokukhwela iinqwelo zeenkomo, amava okulima kunye nenkcubeko kunye nethuba lokuhlala kwiindawo zokuhlala ezilalini ukuvelisa amathuba engqesho kunye namanye amathuba oshishino kuluntu lwasemaphandleni.
Utyelelo lokuvezwa kunye noqeqesho olusekelwe kwiimfuno malunga nokusebenza kwekhaya, ukupheka, impilo kunye nococeko, ukugcinwa kweencwadi kunye ne-accounting, ukugcinwa kwendlu, ulawulo lwendlu yeendwendwe, isikhokelo, ubuntununtunu kubahambi, ukufotwa kunye nokubloga kuyabonelelwa. Ukufika kwabakhenkethi kudale ingqesho yabakhokelayo, abaqhubi, amagcisa, kunye namanye amathuba okuthengisa iimpahla kunye neenkonzo kubatyeleli. Amagcisa ezi lali nawo azixakekise kulwahlulo loqoqosho lwasekuhlaleni ngophuhliso nophuhliso lwezandla phantsi kweenkqubo zophuhliso lwezikhumbuzo.
Embindini weprojekthi kukuzibophelela ekubandakanyeni, "Omnye kunye nabo bonke kufuneka bafumane isabelo sabo esifanelekileyo". Basebenza kunye nee-panchayats ukubandakanya abantu kungakhathaliseki intlalontle (inqanaba lomzimba, lokufunda nokubhala, isini, isakhono, inkolo, imiqobo yenkcubeko, njl.njl.) kunye nemeko yezoqoqosho (ubunini bomhlaba, amanqanaba engeniso, ukufikelela kwiinkonzo eziphakamisa amathuba ezoqoqosho, njl.)
Ukwandiswa kweyantlukwano kwezoKhenketho: Ibandakanya njani iShishini lethu?
Sihamba ukuze sifumane inkcubeko, uluntu kunye neendawo. Ukuba yonke indawo yayifana, kutheni uhamba? Nangona sifuna iyantlukwano ngokuhamba, siqaphele ukuba iyantlukwano ayisoloko ibonakaliswa kushishino olunceda abanye ukuba babe namava anjalo. Ukwahluka ligama elibanzi: “izazisi zibandakanya, kodwa aziphelelanga apho, kwisakhono, ubudala, ubuhlanga, ubuni kunye nentetho, iwonga lokufudukela kwelinye ilizwe, iyantlukwano ngokwengqondo, imvelaphi yobuzwe, ubuhlanga, inkolo, isini, kunye nokuziqhelanisa ngokwesondo.
Asilindelanga ukufumana umbutho owenze inkqubela ebonakalayo kuzo zonke ezi kule minyaka imbalwa idlulileyo. Kwishishini lethu, ngabantu esibaqesha kumanqanaba ahlukeneyo, ngubani esimaketha kuye, indlela esibonisa ngayo iindawo esizithengisayo, uluhlu lwamava esiwakhuthazayo, kunye namabali esiwabalisayo. Sibonakalisa kakuhle kangakanani iyantlukwano yeendawo esizithengisayo?
Eli candelo litsha kwiiMbasa kulo nyaka, kwaye sifumene amangenelo ahlukeneyo.
Abagwebi bachukumisekile yiyantlukwano kunye nobubanzi bamava anikezelwa nge-No Footprints ngobomi bexesha langoku eMumbai, enika ingqiqo yokwenene kubahambi kunye nabakhenkethi. Baye bamkelwa njengoyena Msebenzi woKhenketho oBalaseleyo kwiiMbasa zezoKhenketho eziThatha uxanduva eIndiya ngo-2020: “Akukho Mpawu evumela iindwendwe ukuba zinxibelelane noluntu oluye lwasenza esi sixeko sibe yile nto siyiyo kwizizukulwana ngezizukulwana, ukudibana nabo, nokuva amabali abo. Akukho ziNyawo zibonelela ngamathuba okudibana neeParsees, iBohris, amaIndiya aseMpuma kunye noluntu lwamandulo. ” Ngo-2021 baye bamkelwa kwi-WTM Global Responsible Tourism Awards.
Akukho ziNyawo zilungiselela amava okuhamba e-niche kubahambi. Kule minyaka mithandathu idlulileyo, baye benza amashumi amabini anesibini amava ahlukeneyo eMumbai kwaye ngoku bayanda ukuya eDelhi. Umnqweno wabo kukwazisa abahambi ngembali, inkcubeko, kunye nabantu abahlukeneyo baseMumbai naseDelhi. Phakathi kokhenketho lwabo oludumileyo yiMumbai ekuzeni kusa, ukuhamba kokutya esitratweni, iWorli Fishing Village, iColonial Walk kunye nokhenketho lwabo oluyilelwe ukuchukumisa iimvakalelo ezintlanu, izinto ezibonwayo kunye nezandi, kubandakanya namava obuqu eBollywood, incasa yeKonkan yokukhwela, amavumba emarike yeziqholo kunye nokuchukumisa iMumbai ngemisebenzi kwiziko loluntu okanye ngokuthetha ukukhwela uloliwe oxineneyo.
Banikezela ngeendibano zocweyo zobugcisa nezokupheka, ukhenketho lomjikelo welifa lemveli kunye nethuba lokuva imincili yeqakamba. No Footprints bandisa uluhlu lokhenketho olunikezelwa kubahambi kunye nobunzulu bamava abawanikezelayo. Queer*-ukhenketho olunobuhlobo ngoku lunikezelwa luluhlu lweenkampani kulo lonke elaseIndiya. Akukho Footprints uye wadlula ukuba gay friendly. “No Footprints 'Queer's Day Out inika usuku olupheleleyo lokudlala ngothando ngemiba eyahlukeneyo eyakha ubomi be-Queer babantu esixekweni. Olu khenketho lubandakanya ukutyelela kwitempile yesithixokazi esinqulwa ngabantu bemveli be-transgender ukudala ithuba lencoko malunga nokuhamba ngenqanawa kunye ne-Grindr, i-Pride, i-Coming Out kunye ne-Drag. Queer ngabanye curate kwaye akhokele ukhenketho, ukuqinisekisa ubunyani kwaye kwenza abakhenkethi ukufumana ingqiqo kwinkcubeko Queer yesixeko.
Ukunciphisa iNkunkuma yePlastiki kwiNdawo
Ubhubhani we-Covid-19 unyuse kakhulu inani leplastiki esetyenziswa kanye, ukongeza kwingxaki yenkunkuma yeplastiki. Inkunkuma yeplastiki ngoku ingena kumxokelelwano wokutya wezinye iintlobo kunye nowethu. Nje ukuba iplastiki ingene kwimijelo yamanzi, iphelela kwi-gyros yenkunkuma elwandle, kwiilwandle nakwizisu zeentlanzi esizityayo. Ishishini kufuneka lenze ngakumbi ukunciphisa ukusetyenziswa kweeplastiki ezisetyenziselwa enye kwaye lithathe uxanduva kunye nokusebenza kunye noluntu lwasekuhlaleni kunye noorhulumente babo ukubamba inkunkuma yeplastiki eneminatha kunye nezithintelo ezidadayo kunye nokunyuka kwayo njengeecobbles, ifenitshala kunye nemisebenzi yezandla.
Iijaji zeGlobal zachukunyiswa luluhlu olubanzi lweendlela abaphathi abaye basebenza ngazo ukunciphisa ukusetyenziswa kweeplastiki kwindawo yokuchithela iiholide kunye nokuhlaziya kwakhona ikhonkco labo lokubonelela ukuphelisa iplastiki.
KwiSix Senses Resort kwisiqithi saseMaldivian saseLaamu, iindwendwe zijoyina uKhenketho oluZinzileyo ukuze lubone ukuqaliswa kokutsha kunye novavanyo olusebenzayo kwi-Earth Lab, indawo yabo yokuzimela kunye nenkcitho engafunekiyo. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide izibekele injongo yokuba ibe yiplastiki-simahla ngo-2022. Oku kubandakanya zonke iiplastiki zangaphambili zendlu kodwa kunye nokupakishwa kokutya. Owona mceli mngeni mkhulu wabo yayiziibhokisi ze-styrofoam ezazisetyenziswa ngabalobi basekuhlaleni ukugcina intlanzi yabo phambi kokuba bayizise kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide, abasebenzi basebenze nabanikezeli bezinto zokupakisha kunye nabalobi basekuhlaleni kwaye ngoku bahambisa ukutya kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide ngeebhokisi zekhadibhodi ezifakwe ngaphakathi ezineephaneli ezenziwe. ye-hemp, ijute, kunye nemicu yeplanga, i-100% enokubola kwaye iyavundiswa kwaye iphelisa iibhokisi ze-styrofoam ezingama-8,300 ngonyaka. Ngokusebenzisa i-osmosis ebuyela umva elandelwa kukucocwa kwe-ultraviolet, amanzi etyuwa ahluziweyo akhutshwa ityuwa, acocwe kwaye enziwe alungele ukuhlanjwa nokusela kwiibhotile zeglasi.
Isitiya sabo saMagqabi sibonelela ngezityalo ezingama-40 ezahlukeneyo kunye nemifuno, kwaye i-'Kukulhu Village' ibonelela ngamaqanda kunye neenkukhu kwiindawo zabo zokutyela. Ngokuvuna iimpahla kwisiqithi, indawo yokuphumla iyakwazi ukunciphisa kakhulu ukupakishwa kokutya kweplastiki. Bathengisa izixhobo zeplastiki ezingenaplastiki kwivenkile ethengisa amanzi, equka ibhotile yamanzi ephinda isetyenziswe, ingxowa enokuphinda isetyenziswe, ibrashi yamazinyo yoqalo, neepensile zomthi. Iindwendwe zithunyelelwa iingcebiso zokupakisha ezicela iindwendwe ukuba zishiye iimveliso zeplastiki ezisetyenziswa kanye ekhaya kwaye zithathe nayiphi na inkunkuma yeplastiki ekhaya apho inokuhlaziywa ngcono. Iminatha yokuloba eshiyiweyo, ekhukuliswe elunxwemeni, inyuswa ngeebhayisikili.
Amashumi amahlanu eepesenti eepesenti zokuthengiswa kwamanzi kuzo zonke iindawo zokutyela zaseSix Senses Laamu zingena kwingxowa-mali ebonelela ngamanzi acocekileyo, athembekileyo okusela kuluntu lwasekuhlaleni oludingayo. ISenses ezintandathu uLaamu ugqamile ngokufakela izihluzi zamanzi ezaneleyo (97) kuluntu lwasekuhlaleni ukuze kupheliswe ngaphezulu kwe-6.8 yezigidi zeebhotile zamanzi zeplastiki minyaka le. Baye baqhuba ngaphezulu kwe-200 yokucoca iilwandle kunye nolwalwa- kubandakanywa nokungenisa idatha kwiProjekthi AWARE- kwaye babambe iiseshoni zokufundisa kuwo onke amalungu oluntu ngongcoliseko lweplastiki kunye nolawulo lwenkunkuma.
Ukukhulisa iNzuzo yoQoqosho lweNdawo
Kusekho indawo ye-CSR1.0 kunye nesisa, njengoko kubonisiwe kunyaka ophelileyo wokuZinzisa abaSebenzi kunye noluntu ngodidi lweNtsholongwane. Nangona kunjalo, ngokulungelelanisa indlela abaqhuba ngayo ishishini, ababoneleli ngendawo yokuhlala kunye nabaqhubi bezokhenketho banokudala amathuba emarike eyongezelelweyo kuluntu lwasekuhlaleni kumakhonkco abo okubonelela kunye nokudala amathuba okuthengisa iimpahla kunye neenkonzo ngokuthe ngqo kubakhenkethi.
Oku kohlula uqoqosho lwengingqi kwaye kutyebise indawo ekusingwa kuyo ngezimvo zombini, kudala indlela yokuphila eyongezelelweyo kubahlali basekhaya kunye noluhlu olutyebileyo lwemisebenzi, ukutya neziselo, kunye neemveliso zobugcisa kunye nezobugcisa kubakhenkethi. Iindawo ekusingwa kuzo zinganceda olu tshintsho, phakathi kwezinye izinto, ngokubonelela ngenkxaso-mali encinci, uqeqesho kunye nokuthantamisa, ukudala iindawo zentengiso kunye neendawo zokusebenza kunye nokubonelela ngoncedo lwentengiso.
Kumxholo wobhubhane, iijaji zeGlobal zajonga amashishini asebenze ngokukhutheleyo ukugcina nokuphuhlisa ubudlelwane phakathi kweendwendwe zangaphambili nezinokubakho, zisebenzisa izindululo kunye nokuthunyelwa ukwenza ishishini lasekhaya nelamazwe aphesheya ngokhenketho olubonakalayo. Baye bahlengahlengisa ishishini labo kwaye baphucula izakhono zabasebenzi babo kwiofisi yaseMumbai ukuqinisekisa ukuba iiNdlela zeLali zinokukhula ngaphandle kobhubhane.
Xa i-Covid ibetha, ukhenketho lwayeka. Iindlela zaseLalini zihlengahlengiswa ngokuphuhlisa ukhenketho olululo kunye noluntu lwasezilalini, kuquka nemiboniso yezokupheka, ukhenketho ngalunye olunenyani lutsale abathathi-nxaxheba abamalunga nama-200, luhlala luhlaziya ukwazana kwakudala kwi-ether. IiNdlela zaseLalini ziphumelele ekufumaneni izivumelwano zoqeqesho eMadhya Pradesh. Baye bahlengahlengisa, bavala i-ofisi yabo yokuthengisa yase-UK, bacwangcisa ukuthengisa ngaphandle kwemigudu e-UK, kunye nokuphuhlisa ngakumbi izakhono ze-ofisi yase-Mumbai.
Baqala ukwakha kwakhona kwimarike yasekhaya yaseIndiya. Imodeli yeVillage Ways yahlukile. Iindwendwe ziyamenywa ukuba zihambe ngokwembonakalo-mhlaba ukusuka kwilali ukuya kwilali kunye nomkhokeli wasekhaya ohlala kwiindlu zeendwendwe ezakhiwe ngenjongo, ezizezabantu, ezilawulwayo nezinabasebenzi boluntu. Zonke iikomiti zelali ezilawula izindlu zeendwendwe zisebenza ngokungafihlisiyo.
Iprojekthi ye-Binsar yaqala i-Village Ways ngo-2005, isebenza neelali ezintlanu. Ngoku basebenza neelali ezingama-22 zihambisa izibonelelo ezibambekayo kwezoqoqosho nezentlalo, ngamathuba engqesho kubantu abaselula abanokuthi ngenye indlela bafudukele ezixekweni. Ingeniso yezokhenketho iyancedisana kunokuba ithathe indawo yomnye umvuzo ukuze amakhaya angawushiyi umsebenzi wesintu onjengokulima. Bakwakhuthaza ukulingana ngokwesini kunye nokubandakanywa koluntu.